Ifama yentsapho eGalesu - I-Airbnb
Ifama yentsapho eGalesu
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguIonel
Ulwamkelo lwendlu yosapho esemazantsi eeNtaba zeCarpathian ilinde iindwendwe! Apha uya kuba nethuba lokuhlola iinduli, iintaba kunye nobomi belizwe. Sikwanayo nefamily ifama encinci, eyahlukileyo njengoko sineenkomo, iihagu, iinkukhu, iigusha. Unako kwakhona ukuthatha inxaxheba kumsebenzi wobomi bemihla ngemihla kusapho lwethu, ukusenga inkomo, ukuqokelela ingca, iziqhamo zonyaka okanye nokulungisa itshesi yesiko kubisi lwakho. Kwabo banomdla sinokulungiselela ukutya kwiimveliso zethu ze-bio.
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwikhitshi lethu, igumbi lokuhlambela, i-terrace, igadi.
4.91 · Izimvo eziyi-57
IGalesu yilali ekhethekileyo apho izithethe zisagcinwa ziphila kwaye apho abantu bahlala kuhlobo lonxibelelwano oluzolileyo kunye nendalo. Apha zigcinwe phantse 300 iintlobo zezityalo kunye nentlanzi ekhuselweyo ebizwa ngokuba "asprete" - Romanichthys valsanicola, uhlobo olunye lweentlanzi olusukela kwixesha langaphambili kwaye inokufumaneka apha nje.
Ayisiyiyo kuphela ilali ebonelela ngezinto ezininzi zokwenza njengokuhamba ehlathini, ukujonga izithethe zasekhaya "ziphile" kunye nemyuziyam yendawo, kodwa ummandla utyebile ngamathuba. Kufuphi, ilali yaseCorbi inendlu yeemonki yenkulungwane ye-XIV, ekucingelwa ukuba yayiyitempile yaseDacian kumaxesha angaphambili. Kumgama wokuhamba endulini, umntu unokufikelela kwiRobaia Monatery, indawo ezolileyo nenoxolo phakathi kwehlathi. Ngaphezu koko, abantu baseGalesu banokuqhuba ngendlela ekhangayo yaseRomania, eTransfagarasan, "enyuka" ukuya kuthi ga kwi-2000 m ukuphakama.
Kuko konke apha unokufumana ubomi bokwenyani basemaphandleni eRomania kunye nendalo engakhange ichukunyiswe, silinde ukuba uyiphonononge.
Umbuki zindwendwe ngu- Ionel
Andizu kufumaneka ngokobuqu njengoko ndihlala eBucharest, ngeempelaveki ndiya kuba lapho ngamanye amaxesha. Ixesha eliseleyo usapho lwam luya kusebenzisana neendwendwe.